Amiirka Kuwait ayaa ku faraxsan heshiiska in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya walaalaha… – Hagaag.com
Amiirka Kuwait ayaa ku faraxsan heshiiska in la xaliyo khilaafka u dhaxeeya walaalaha…
Posted on 5 Diseembar 2020 by Admin in World // 0 Comments
Amiirka Kuwait, Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, wuxuu u diray laba warqad oo mahadcelin ah Amiirka Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, iyo Boqorka Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz, dadaalka ay ugu jiraan xakameynta xiisadda Khaliijka iyo inay gaaraan heshiis kama dambeys ah oo dammaanad qaadaya midnimada iyo wadajirka mowqifka Khaliijka.
Sheekh Nawaf wuxuu intaas ku daray in heshiiska uu ka turjumayo walaaca laga qabo guulaha laga gaadhay khaliijka, midnimadiisa, iyo doorka ay ku leedahay fagaarayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga, wuxuuna xoojiyay in awoodda shaqo lagu gaarayo rajooyinka iyo himilooyinka shucuubta Khaliijka.
Amiirka Kuwait wuxuu sidoo kale mahadcelin u diray Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka Donald Trump dadaalkii “weynaa ee kartida badnaa” ee uu Mareykanku sameeyay tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee uu dillaacay khilaafka Khaliijka, taasoo ka tarjumeysa sida loogu baahan tahay amniga iyo xasilloonida gobolka, iyo ka warqabka lama huraanka ah ee midnimada iyo is-kaashiga si loo wajaho caqabadaha gobolka iyo adduunka.
Sidoo kale Amiirka Kuwait wuxuu dhambaalka ku sheegay waxqabadkii ugu dambeeyay ee Jared Kushner, lataliyaha madaxweyne Trump.
Amiirka Kuwait ayaa wuxuu muujiyey, subaxnimadii Sabtida, inuu ku faraxsan yahay heshiiska “in la xaliyo khilaafka u dhexeeya walaalaha iyo in la hubiyo wadajirka Khaliijka iyo Carabta.”
Bayaan ay soo saartay wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Kuwait, Sheekh Nawwaf wuxuu ku ammaanay horumarka laga gaaray xallinta xiisadda Khaliijka.
Tani waxay imaaneysaa iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in maamulka Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka (Trump) uu xoojiyay dadaalkiisa ku aadan dejinta xiisadda Khaliijka, taasoo u horseedi karta horumar.
Laga soo bilaabo bishii Juun 5, 2017, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka, Baxrayn iyo Masar waxay xayiraad dhulka, cirka iyo badda ah ku soo rogeen Qatar, iyagoo sheeganaya inay taageerto argagixisada, halka Doha ay beenisay eedeymahan oo ay u aragto inay yihiin isku day lagu wiiqayo madaxbanaanideeda iyo go’aankeeda madaxa bannaan.